Toriteny Alahady 16 aout 2009 : Izay rehetra tezitra amin'ny rahalahiny dia mendrika hohelohina amin'ny fitsarana – FJKM Ambavahadimitafo Toriteny Alahady 16 aout 2009 : Izay rehetra tezitra amin'ny rahalahiny dia mendrika hohelohina amin'ny fitsarana |
Toriteny Alahady 16 aout 2009 : Izay rehetra tezitra amin'ny rahalahiny dia mendrika hohelohina amin'ny fitsarana
Fa Izaho kosa milaza aminareo hoe : Izay rehetra tezitra amin’ny rahalahiny dia mendrika hohelohina amin’ny fitsarana ; ary na zovy na zovy no hanao amin’ny rahalahiny hoe : Olom-poana hianao, dia mendrika hohelohina amin’ ny Synedriona ; ary na zovy na zovy no hanao hoe : Foka ialahy ; dia mendrika ho ao amin’ny helo mirehitra afo (Matio 5 : 22 )
Zavatra roa no atoron’Andriamanitra antsika.
1) Aza mitahiry fahatezerana amin’ny rahalahinao
Izany no hitantsika ao amin’ny fiandohany ao amin’ny andininy faha 22 manao hoe : « Izay rehetra tezitra amin’ny rahalahiny dia mendrika hoheloina amin’ny fitsarana ».
Ny hoe tezitra ry havana dia midika hoe fananana alahelo amin’ny hafa, ary ny fahatezerana amin’izany dia mitsoka ao anatiny ka miteraka fankahalàna tanteraka . Ary eto ilay fahatezerana dia tsy miseho ety ivelany fa mijanona ao amin’ilay olona izay manana azy ihany.
Ambaran’ny tenin’Andriamanitra fa izany alahelo na fahatezerana izay ao anaty izany dia mahatonga ny olona ho meloka eo anatrehan’ny fitsarany. Zavatra tsapa anefa eto amin’ity tenin’Andriamanitra ity dia izao : mety tsy hijanona ao anaty izany alahelo izany fa mety hiseho ety ivelany amin’ny alàlan’ny fihetsika atao, amin’ny alàlan’ny teny izay ataon’ny olona, ary eto moa dia miseho amin’ny alàlan’ny teny izany, ary hitantsika amin’ny andininy faha 22 ihany izany : «ary na zovy na zovy manao ny rahalahiny hoe olo-poana ianao dia mendrika hohelohina amin’ny Synedriona ».
Izany hoe miseho amin’ny alàlan’ny teny izany ilay fahatezerana izay hita ao anaty. Ary ny hoe « olo-poana » ry havana dia midika ho fanambaniana namana izany, midika ho fanadisoana ny namana izany, midika ho fitenenan-dratsy ny namana izany, ary raha manao izany hoy Jesoa dia mendrika hohelohina amin’ny fitsarana ambony, izany hoe tsy tahaka ilay fitsaràna izay teo aloha izay fitsarana teo an-tanàna ihany moa araka ny dikan-teny iombonana hoe fitsarana voalohany.
Na zovy na zovy no miteny hoe foka ialahy… :
Fa fitsaràna ho an’ny dingana izay avo avo kokoa, ambonimbony kokoa ; raha mijery isika amin’ny andininy faha 22 ihany dia hita ao ny hoe : « na zovy na zovy no miteny hoe foka ialahy dia mendrika ho ao amin’ny helo mirehitr’afo ». Ny hoe « foka » dia azo adika hoe tsisy dikany na hoe tsy misy heviny, na koa hoe tsinontsinona, izany hoe mamono ny maha izy ilay olona manontolo, manala ny zo aman-kasin’izany olona izany, ary ny olona izay lazaina ho « foka » izany moa dia heverina ho toy ny maty mihitsy satria very ny maha-olona azy, ary eto dia dingana fara-tampony mihitsy ny fanamelohana azy dia any amin’ny farihy mirehitr’afo izany.
Midika izany fa fahaverezana mandrakizay no miandry izay manao tsinontsinona ny olona na ny rahalahiny izany. Araka izany ny fahatezerana na ny alahelo amin’ny namana na amin’ny endrika anatiny na amin’ny endrika ivelany dia mahameloka eo anatrehan’ny fitsaràna, mahameloka eo anatrehan’ Andriamanitra.
Mamelà azy, fa Izaho no làlana izay ahamarina ny fifandraisanao aminy :
Ry havana, na inona na inona mahatezitra antsika amin’ny namantsika ka tazomintsika ao anaty izany dia tsarovy fa mahameloka eo anatrehan’Andriamanitra. Koa aoka hadio fo mandrakariva amin’ny namantsika isika, marina fa mety hisy hampahatezitra antsika noho ny ataon’ny hafa, mety hisy hampalahelo noho ny afitsokin’ny sasany, mety hisy koa hampamoy fo noho ny ataon’ny namana, ny tenin’ny Tompo dia izao hoe : « mamelà azy, fa Izaho no làlana izay ahamarina ny fifandraisanao aminy ». Araka izany dia tsy maintsy ataon’ny kristianina ny manafoana ny alahelony amin’ny hafa, ny manafoana ny fahatezerany amin’ny namany mba hahadio fo amin’izany namana izany, ary tokony ho fiainan’ny kristianina izany, mamela ny alahelony amin’ny hafa, mamela ny hadisoan’ny hafa.
2) Ny mihavana amin’ny rahalahy
Araka ny andininy faha 23 sy 24 : « ary amin’izany raha mitondra fanatitrao eo amin’ny alitara ianao ary eo no mahatsiaro fa ny rahalahinao manana alahelo aminao dia avelao eo anoloan’ny alitara ny fanatitra ka mandehana aloha, ataovy izay hihavananao amin’ny rahalahinao ary rehefa miverina izy vao atero ny fanatitrao ».
Tsy misy dikany izay fanatitra atao raha…
Hita eto ny hoe « fanatitra », izay fanoloran-tena ho an’Andriamanitra, ary fanamafisana ny fihavananao amin’Andriamanitra. Ary raha amin’ny fotoana izay hanantanterahana izany fanatitra izany no mahatsiaro fa manana halahelo amin’ny namanao ianao dia ny zavatra izay atao amin’izany dia ny mihavana, mandeha mifona amin’izany rahalahinao izany mba hamitrànana indray ilay fihavanana amin’izany fihavanana izany.
Ary tsarovy fa tsy misy dikany izay fanatitra atao raha ohatra ka isika aza hanànan’ny olona halahelo, hanànan’ny olona fahatezerana, ary izany no hita eto dia ataovy izay hihavànana amin’izany rahalahinao izany vao mandeha manatitra ny fanatitrao ianao.
Mihavàna faingana amin’ilay manana ady aminao
Ny tanjona tiana ho tratrarina amin’izany ry havana dia ny tsy hanànan’ny hafa halahelo amintsika, ary izany no tsy maintsy hihavanana faingana amin’izany namana izany mba hahatonga azy hadio fo, ary eto dia tsy halahelo amin’ny hafa ihany no lazaina, fa na ny fifandirana amin’ny hafa koa dia tsy maintsy hihavanana amin’ny namana, ary izany no hita ao amin’ny andininy faha 25 manao hoe : « mihavàna faingana amin’ilay manana ady aminao ».
Eo amin’ny fiainana ry havana dia misy zavatra samihafa izay atao hoe mampiady hevitra mandrakariva ary mety hitarika hatrany amin’ny fifampiandaniana izany, mety hampiady antsika amin’izany namana izany, ka raha isika no tojo toe-javatra tahaka izany dia inona no tokony ataontsika ? Dia tsy inona fa ny mihavana faingana.
Eto dia ny rahalahy no manana ady amintsika , ary ny làlana voalohany hivoahantsika amin’izany dia ny fihavànantsika aminy ihany, mba hadio fo amintsika, mba hirindra tsara ny fifandraisantsika amin’izany rahalahintsika izany.
Ry hava-malala ao amin’ny Tompo, manana adidy isika hihavana amin’izay manana halahelo amintsika, izay manana ady amintsika, ary ny fihavànanao amin’ny namanao dia izao : mampitohy indray ilay fifandraisana izay tapaka noho ny toe-javatra samihafa. Koa na inona na inona halahelon’ny hafa noho ny nataontsika dia adidintsika ny mihavana aminy, mifona aminy, mba hampiala izany halahelo izany, mba hampisinda izany fahatezerana izany.
Raha azo atao dia ataovy izay hihavananao amin’ny olona rehetra
Ho famarànana izao toriteny izao dia hoe ny tena kristianina marina ry havana , dia marina amin’ny fifandraisany amin’ny hafa, koa adidinao kristianina ny manafoana ny halahelonao amin’ny hafa, manafoana koa ny halahelon’ny hafa aminao, ary ianao izay kristianina no loha-laharana amin’izany, loha-laharana amin’ny fitandrovana sy fikasàna amin’izany mba hirindra tsara ilay fihavananao amin’ny rahalahinao. Koa adidinao àry no manao izay hahatsara ny fifandraisanao amin’ny namanao ary asehoy amin’ny fiainanao izany eo imason’ny olona fa tsy manana halahelo ianao ary izy tsy manana halahelo anao, ary hoy ny Tompo aminao : « raha azo atao dia ataovy izay hihavananao amin’ny olona rehetra ».
Ho Azy ny voninahitra. Amen.